Home News RW Kheyre oo lagu edeeyay in cuqdo iyo colaad kala dhexdhigayo beelaha...
RW Kheyre oo lagu edeeyay in cuqdo iyo colaad kala dhexdhigayo beelaha reer Puntland
RW Kheyre ayaa lacag fara badan ku bixiyay safarkiisi shalay ee magaalada Qardho ee uu ku soo siyaartay Boqorka Daarood Boqor Burhaan. Safarkaas ayaa waxa uu ku soo beegmay iyada oo dhagax dhig loo sameeynayay Dekadda Cusub ee deegaanka Garacad. Talabadaan ayaa waxaa ay soo cusboonaysiisay cuqdo horay uga dhex jirtay qabaa’ilka ku nool Puntland, taas oo ku salaysnayd taariikho horay uga dhacay Puntland. Dadka reer Mudug ayaa waxaa galay dareen ah in reeraha ku nool Bariga Mudug ayan u ogolaynin in ay dekad yeeshaan.
Salaadiinta Reer bari ayaa iska bari yeelay talaabada uu qaaday RW Kheyre isla markaana ayan raali ka ahyn in dagaal laga dhex huriye reer Puntland. Mid ka mida Xildhibaanada Puntland ayaa yiri ” ninkaan waalan ee nooga yimi Muqadishu waxa uu doonayaa in uu colood kala dhex huriye reer Puntland, waa in uu si deg deg ah uga baxaa Puntand”
Previous articleShariif Xassan oo Digniin u jeediyay Kheeyre Iyo Kooxdiisa Qiyaano Qaran”yaan la carqaladeeyn Doorashada”
Next articleSiyaasiyiinta Puntland oo midaysan oo war ka soo saaray safarka RW Kheyre
Mahad Salaad oo markale weeraray Lafta-gareen
Uhuru Kenyatta oo New York ka sheegay in wadahadal lagu dhameeyo...